I-PressRush: Ipulatifomu Yokuziphatha Okuhloniphekile Yokufinyelela Kwezintatheli | Martech Zone
Nsuku zonke ngithola inqwaba yemigqa ebhokisini lami lokungenayo. Eziningi zazo zibhalwe kabi, eziningi azihambelani nesiza sami, kepha kuhlale kunenothi yegolide enqwabeni kagaxekile be-PR ngakho ngiyanaka. Ngithole indawo yokuvota kuleli sonto lapho i-imeyili ibonakale ihluke kakhulu futhi yanginikeza umuzwa omuhle wepaki.
Ngiyalithanda leli thuba ukwazisa inkampani yezobudlelwano bomphakathi ngakolunye uhlangothi ngokunemba kwenkundla. Uma bengiyithanda iphimbo (ebingaphansi kwezinkinobho), bekufanele ngiphendule ekhelini le-imeyili ebelivela kulo. Indlela enhle kabi futhi enesizotha yochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi ukuqinisekisa ukuhambisana nomthonya noma i-blogger abaxhumana nayo.
Ngenkathi ngiphendula iphimbo elithile, ngiphinde ngabheka nengxenyekazi okwakubhalwe kuyo - Ukucindezela. Nge-Pressrush, ungasetha izexwayiso ngezihloko, udale ama-pitches, abagqugquzeli bokucwaninga, futhi wakhe uhlu lwangokwezifiso ongathumela kulo. Futhi lapho kuthunyelwa izingqimba zakho, zisebenzisa indlela engiyichaze ngenhla.
Ngikholwa ngokuqinile ukuthi ikhambi akukhona ukuthumela izinkundla eziningi. Isixazululo ukwakha ubudlelwano obuhlala isikhathi eside okuqala ngokufinyelela komuntu siqu, okucwaningwe kahle, okubhekiswe kakhulu, futhi okunesikhathi esifanele. Nge-PressRush, ngazimisela ukwakha ithuluzi lokukusiza wenze lokho kanye. UVille Laurikari, uMsunguli wePressrush.
Ukwakha uhlu kulula usebenzisa injini yokusesha yangaphakathi Yezintatheli. Nayi imiphumela ye- analytics kanye namamethrikhi, lapho othola khona okwakho ngokweqiniso:
Futhi uma uchofoza kuphrofayela yami, ungathola konke okuthunyelwe kwamuva engikushicilele kanye nezixhumanisi kumaphrofayli ami enhlalo nakwikheli le-imeyili.
Okuqondiwe kungahlungwa ngeminyaka, indawo nokushicilelwa. Zingahlungwa futhi ngokuzikhumbuza noma ukuhambisana. Lapho usubuyekeze intatheli ngayinye, ungabangeza ohlwini oluthile lwemidiya olungalandwa noma lufakwe kulo. Okuhle kunakho konke, njengoba imininingwane yokuxhumana ishintsha, izinhlu zakho zigcinwa zisesikhathini.
Bhalisela Isivivinyo Sokucindezela
Tags: ukufinyelela kwe-bloggerjournalismukufinyelelaukufinyelela i-imeyiliukubheka ukufinyelelaumshini wokucindezelaUVille Laurikari